Muuse Biixi: “Aniga Ciidankeygu Tukaraq ayey joogaan walina 70KM ayaa ka dhimman xuduudkeygii” (dhegayso) – Radio Daljir
Muuse Biixi: “Aniga Ciidankeygu Tukaraq ayey joogaan walina 70KM ayaa ka dhimman xuduudkeygii” (dhegayso)
Janaayo 20, 2018 5:34 g 0
Madaxeynaha Mamulka Somaliland Muuse Biixi oo maanta Warbaahinta kula hadlayaay Hargeysa ayaa si kulul uga hadlay xiisada ka taagan Tukaraq iyo gobolka Sool oo uu sheegay inay tahay meel ka sokaysa xudduudooda.
“Anigu waxaan taaganahay xuduudeydii ee Cabdiweli muxuu ka rabaa Tukaraq? Isaga Cabdiweli ah wuxuu leeyahay maxaa loo yimid Tukaraq, anna illaa hadda xadkii Somaliland ayaan taaganahay oo weli 70KM iiga hadhay ayuu yiri Muuse Bixii.”
Muuse Biixi ayaa sidoo kale isaga oo sii wata hadalka yiri, “waxaanu u sheegaynaa Caalamka oo dhan iyo Soomaaliyaba anagu dagaal diyaar uma nihin, dalkayagii baanu joognaa, waliba halka ciidanku deganyahay ee Tukaraq 70KM buu xadku u jiraa.”
Hadalkan ka soo baxay Muuse Bixi ayaa ku soo beegmaya xili Puntland isku diyaarinayso sidii gacanteeda mar kale ay ugu soo celin lahayd deegaanka Tukaraq iyo Laascaanood oo muddo hadda ka maqan gacanta Puntland.
Hoos ka dhegayso hanjabaadaha Muuse Biixi:
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Camey oo Garowe kaga qayb galay Shir looga hadlayeey Doorashadda Somaaliya 2020 ( dhegayso)